InVideo: Mamorona horonan-tsary manokana ho an'ny haino aman-jery sosialy ao anatin'ny minitra | Martech Zone
Ny podcasting sy ny horonan-tsary dia fotoana mahavariana hifaneraserana amin'ny mpihaino anao amin'ny fomba mahaliana kokoa sy mahafinaritra kokoa, fa ny fahaiza-mamorona sy ny fanitsiana ilaina dia mety lavitra ivelan'ny ankamaroan'ny orinasa - tsy lazaina intsony ny ora sy ny fandaniana.
Video manana ny endri-javatra rehetra amin'ny tonian-dahatsoratry ny horonantsary fototra, saingy miaraka amin'ireo fiasa miampy ny fiaraha-miasa sy ny modely sy ny loharano misy. InVideo dia manana maodely mihoatra ny 4,000 namboarina mialoha sy fananana an-tapitrisany (sary, horonam-peo ary rakitsary video) azonao atao ny manova, manavao, ary maka azy mora foana hanampiana anao amin'ny famoronana intro, Outro, doka video na horonan-tsary ampiasaina. ho an'ny media sosialy.
InVideo dia tanjona namboarina ho an'ny orinasa, matihanina amin'ny marketing, ary ny matihanina amin'ny varotra hamorona sy hamoaka mora foana ny lahatsarin'izy ireo. Ny sehatra dia ahafahanao manamboatra ny kaontinao amin'ny endriny famolavolana sy mampiasa tranga ka ny laharam-pahamehana ireo dia atao laharam-pahamehana.
Azonao atao koa ny manamboatra ny kaontinao amin'ny sary famantarana, endritsoratra ary loko voalohany mba hahafahanao mampihatra ny modelyo. Isaky ny horonan-tsary tsirairay dia azonao atao ny mampiditra ny feonao manokana, horonan-tsary, horonam-peo na sary tianao hampidirina - noho izany tsy voafetra amin'ny modely na tranomboky fananan'izy ireo ianao.
Azonao atao koa ny mampifandray ny kaontinao Facebook, Twitter, ary Youtube ary mamoaka mivantana avy amin'ny sehatra misy azy ireo rehefa avy mandinika sy mankasitraka ilay horonantsary farany ianao.
Makà 25% amin'ny famandrihana InVideo anao
Andininy amin'ny fanontana horonan-tsary
Fitaovana iray mahafinaritra ananan'izy ireo ny fahaizana mandika na mametaka lahatsoratra, na mamaky lahatsoratra avy ao anaty lahatsoratra iray aza. Noho izany, raha te-hamorona horonantsary fohy sy fohy ianao izay mampiditra hevi-dehibe avy amin'ny lahatsoratrao hampiroborobo amin'ny alàlan'ny media sosialy.
Manangana horonantsary lisitra
Fampiasana iray lehibe an'io ny fanaovana horonantsary lisitra… izay malaza amin'ny alàlan'ny media sosialy. Afaka nanangana ity horonantsary ity aho afaka 10 minitra teo ho eo, nampakatra ny pikasiko manokana ary nampiasa ny iray amin'ireo maodely Listicle maro an'ny InVideo:
Ny interface Storyboard amin'ny famoronana tantara na lisitra dia intuitive ary mora ampiasaina. Azonao atao koa ny mametaka ny script-nao ary mampiorina azy io mifototra amin'ny modely!
Horonan-tsary Intro sy Outro miaraka amin'ny môdely mampiseho ny Logo
Androany, afaka nanova sy namolavola sary mihetsika kely mampiseho sary mihetsika ho an'ny ahy aho Martech Zone horonan-tsary mampiasa sary famantarana InVideo mampiseho:
Afaka nanova ny endritsoratra, ny fizotry ny singa tsirairay avy ary ny sarimiaina mba handrafetana horonan-tsary mahafinaritra mamy aho izao izay azoko ampidirina amin'ireo horonantsary avoakako ho Youtube!
Subscribe to Martech Zone amin'ny Youtube
Ahoana ny fomba hamoronana horonan-tsary avy amin'ny maodely InVideo
Tsotra ny fampifangaroan'ny mpampiasa handefasana ny horonan-tsarinao… safidio ny maodely efa vita, ny môdely an-tsoratra an-dahatsary, na atombohy amin'ny lamba fohy fotsiny.
Raha mitady modely ianao, dia ampidiro teny lakile vitsivitsy hitadiavana iray. Azonao atao ny manindry sy milalao ny tsirairay amin'ny valiny hahitanao ny modely tianao hatomboka.
Safidio ny refin'ny horonantsary - malalaka (16: 9), toradroa (1: 1) na mitsangana (9:16).
Raiso ny safidinao, ampanjifao ilay horonan-tsary, avy eo azonao atao ny misintona azy na mamoaka azy mivantana amin'ny Facebook, Twitter, na Youtube.
Raha te hamboarina manokana ilay horonan-tsary dia ity misy fitsidihana lehibe azafady amin'ireo safidin'ny sehatra. Tena tsy misy fetrany mihitsy!
Raha te hamboarina manokana ilay horonan-tsary dia ity misy fitsidihana lehibe azafady amin'ireo safidin'ny sehatra. Tena tsy misy fetrany mihitsy! Ary… tsy hino ny vidin'ny lampihazo ianao… mahatalanjona izany.
Oh… ary satria ianao dia Martech Zone mpamaky, hahazo 25% ianao indray rehefa mampiasa ny rohiko:
Fialana andraikitra: izaho dia Video mpiara-miasa (sy ny mpanjifa) ary mampiasa ny rohy aho mandritra ity lahatsoratra ity.
Tags: Mpamorona horonantsary doka FacebookMpamorona horonantsary doka FacebookMpamoaka horonantsary instagrammpanamboatra introinvideompanamboatra horonantsary fanasanahoronan-tsary listiclempamorona horonantsary an-tseraserampamoaka horonantsary an-tseraserampanao outrompanamboatra horonantsary promovideo fohyhoronantsary media sosialyhoronantsary sosialympamorona doka videompanamboatra doka horonan-tsarympanamboatra horonan-tsarymodely videoMpanamboatra intro YouTubeMpamorona horonantsary YouTube